Ugu yaraan 11 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Istanbuul - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeUgu yaraan 11 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Istanbuul
June 7, 2016 Abdi Omar Bile Home, World 0
Weerar bumbo oo lala eegtay gaari booliis ah gudaha magaalada Istanbuul ayaa waxaa ku dhimatay ugu yaraan 11 qof, oo ay ku jiraan saddex katirsan ciidamada booliiska, sida uu sheegay guddoomiyaha magaalada.
“Todobo booliis ah iyo afar shacab ah ayaa naftooda ku waayay,” Vasip Sahin oo ah guddoomiyaha Istaanbuul ayaa wariyeyaasha ugu sheegay goobta uu qaraxa ka dhacay. 36 qofna waa ay ku dhaawacmeen, oo ay saddex kamid ah halis yihiin, ayuu ku daray.
Madaxweyne Rajib Dayib Erdogan ayaa sheegay maanta oo Talaado ah in dalka uu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah kooxaha hubaysan ilaa ay ka dhamayn doonaan. Isagoo la hadlayay saxaafada kadib booqasho uu ugu tagay isbitaalka qaybo kamid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxa, Erdogan wuxuu sheegay in weerarka uu ahaa mid aan sina loo ogolaan doonin.
Qaraxa ayaa yimid iyadoo lagu jiro maalmihii ugu horeeyay ee bisha Ramadaan ee barakaysan.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Agaasimihii hore ee haayada macdanta iyo batroolka Puntland ayaa maanta xilka ku wareejiyay agaasime cusub oo dhawaan madaxweynuhu soo magacaabay. Munaasabad ka dhacday magaalada Boosaaso, ayaa agaasimihii hore Ciise Maxamuud Dholowaa shaqada ku [...]
Garacad-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah dhagax dhigay dekad cusub oo laga dhisi doono magaalo xeebeedka Garacad ee gobolka Mudug. Madaxweynaha oo ka hadlay munaasabada dhagax dhiga ayaa [...]